စကျတငျဘာ 3, 2019 – Healthy Life Journal
လူတွေ ဘာကြောင့် အ၀လွန်လာကြသလဲ . . .
မေး. အခုခေတ်မှာ အ၀လွန်သူတွေများလာပါတယ်။ အရင်နဲ့စာရင် ဘာကြောင့် ပိုပြီး အ၀လွန်လာရတာပါလဲ ဆရာ။ ပါမောက္ခဦးကိုကို(ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. Thifty သီအိုရီအရ ကျောက်ခေတ်မှာလူတွေက ထမင်း၀၀မစားခဲ့ရပါဘူး။ အမဲရမှ စားရတယ်၊ အမဲမရရင် မစားရပါဘူး။ အမဲရပြီဆိုရင်တော့...
တစ်နေ့လုံး အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းစေမည့် နည်း ၁၂ သွယ်
– စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) (၁) တစ်ချိန်တည်းမှာ အလုပ်မျိုးစုံလုပ်တာ ရှောင်ပါ တစ်ချိန်တည်းမှာ အလုပ်မျိုးစုံလုပ်တာက အမှားများစေနိုင်တဲ့အတွက် ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ (၂) တရားထိုင်ပါ တရားထိုင်တာကြောင့် အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကောင်းပြီး တစ်နေ့လုံးလုပ်သမျှ စူးစိုက်အားကောင်းကာ အလုပ်တွင်ကျယ်စေပါတယ်။ (၃) ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ဦးနှောက်ထဲကနေ...
လာမည့် ၂၀၂၀တွင် လက္ခဏာမပြမီ အဆစ်ရောင်နာရှိ၊ မရှိ နှစ်နှစ်ကြိုတင် စစ်ဆေးသိရှိနိုင်မည်
၊ ကိုထက် ၊ အဆစ်ရောင်နာထဲမှာ အဖြစ်များဆုံး OA အဆစ်နာရောဂါရှိ၊ မရှိ ရိုးရှင်းတဲ့ စစ်ဆေးမှုကို ရောဂါလက္ခဏာမပေါ်ခင် နှစ်နှစ်အလိုမှာ ကြိုတင်စစ်ဆေး သိရှိနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဗြိတိန်လူမျိုး ၈ သန်းခွဲက OAအဆစ်နာဝေဒနာ (Osteoarthritis) ခံစားနေရပြီး...
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူရာမှာ ကိုယ့်ဘာသာ စစ်သင့်သလား၊ ဆရာဝန်နဲ့ အရင်တိုင်ပင်သင့်သလား . . .
မေး. ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်ချင်ပါတယ်။ တစ်ခုသိချင်တာက ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု မခံယူခင်မှာ ကိုယ့်ဘာသာ စစ်တာကောင်းပါသလား၊ ဆရာဝန်နဲ့ အရင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်သင့်ပါသလား ဆရာ။ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. တချို့နေရာတွေမှာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ Package တွေခွဲထားပါတယ်။ လူနာတွေက...
ဘယ်လောက်ရေအပူချိန်က အိပ်ရေး၀၀ အိပ်မောကျစေသလဲ . . . ရေချိုးတာက နေ့တိုင်းလုပ်နေကျအလုပ်ပါ။ တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာ ရေချိုးပေးတာက စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေပါတယ်။ ရေအေး ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို လှုံ့ ဆော်ပေးပါတယ်။ နိုးကြားတက်ကြွစေပါတယ်။ အအေးမိတာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါဟန့်တားတဲ့...
စကျတငျဘာ လ၊ 2019 ခုနှဈ